यदि तपाईको कारमा यी ५ संकेत देखिएमा तुरुन्त सर्विस सेन्टरमा लैजानुहोस् ! « NagarikTimes : National News Portal From Kathmandu
यदि तपाईको कारमा यी ५ संकेत देखिएमा तुरुन्त सर्विस सेन्टरमा लैजानुहोस् !
१५ भाद्र २०७७, सोमबार ००:००
कारलाई नियमित सर्विसीङ गरे मात्र तपाईको कार राम्रोसँग चल्न सक्छ । तपाईको कारले राम्रो माइलेज पनि दिन सुरु गर्दछ।
र यो मात्र होइन, तपाईको कारको जीवन पनि बढ्छ। जब तपाईं नयाँ कार किन्नुहुन्छ, तपाईले कार सर्विसीङ गनुपर्ने हुन्छ । सर्विसीङ त गर्नुहुन्छ तर के गर्ने जब तपाईको कारको ओरिजिनल एक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर समाप्त हुन्छ ।
त्यसैले विशेषज्ञहरूले तपाईलाई प्रत्येक ६ महिना देखि एक बर्ष वा प्रत्येक १०,००० किमि पछि आधारभूत परीक्षणको लागि जान सिफारिस गर्नुहुन्छ किनकि यसले तपाईको कारलाई राम्रोसँग राख्न मद्दत गर्दछ।
त्यसोभए तपाईको कारको राम्रो हेरचाहको लागि, हामी त्यस्ता केहि तष्उक सल्लाहहरू लिएर आएका छौं, ताकि तपाईले आफ्नो कारलाई सेवा केन्द्रमा कहिले लिनुपर्नेछ भन्ने कुरा थाहा पाउनुहुनेछ।
1. ईन्जिन चेतावनी लाइट –
यदि चेक ईन्जिन प्रकाश आयो भने यसले कारको ईन्जिनसँग समस्या देखाउँदछ। कुनै समस्या छैन, यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाई सकेसम्म चाँडो आफ्नो कार जाँच गर्नुहोस्, यद्यपि हामी यसलाई तुरून्त सेवा केन्द्रमा लैजाने सिफारिस गर्छौं।
2. ब्रेक समस्या –
हामीले तपाईलाई भन्नु पर्दैन कि ब्रेक कुनै पनि गाडीको लागि कत्तिको महत्त्वपूर्ण छ ? त्यसकारण तपाईको सुरक्षा संग यो पनि महत्त्वपूर्ण छ तपाईको कारको ब्रेक जाँच गर्नु। यदि ब्रेक खाली छ वा पा तजभ्गले कम्पन गरिरहेको छ भने तपाईले तुरुन्तै यसलाई जाँचको लागि लिनु पर्छ।
3 .तल कारको चुहावट –
यो समय हुन सक्छ कि तपाईले पानी, इन्जिन तेल वा तपाईंको कार मुनि कुनै अन्य पदार्थ देख्नुहुनेछ। यदि तपाईले सडकमा पनि यस्तै देख्नुभयो भने, त्यहाँ तपाईंको कारमा ठूलो समस्या छ।
उदाहरण को लागी, ईन्जिन तेल लीक तेल पैन लीकको कारण हुन सक्छ, ईन्जिन गस्केट बिगार्न सक्छ, इत्यादि। यदि तपाई कार सुरू गर्न सक्षम हुनुहुन्छ भने, यसलाई तुरून्त मैकेनिकमा लानुहोस् वा तपाईंको स्थान कल गर्नुहोस्।
4 .पावर नोक्सान –
यदि तपाईको कार ड्राइभिंगको बखत शक्ति गुमाउँदछ, यो सम्भवतः कम इञ्जिन कम्प्रेसनको कारण, ईन्धनको ईन्धन फिल्टर, वा त्यस्तै केहीको कारण हुन सक्छ। जस्तोसुकै समस्या के हो, पावर घाटाले तपाईं र तपाईंको कारलाई जोखिममा राख्न सक्छ विशेष गरी यातायातमा। यसलाई तुरुन्त जाँच गर्नुहोस्
यदि तपाई आफ्नो कारमा कुनै अनौंठो ध्वनि प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ भने पहिले जाँच गर्नुहोस् कि यो आवाज कहाँबाट आउँदैछ। धेरै पटक यस्ता आवाजले तपाईको कारमा समस्या निम्त्याउन सक्छ। यस्तो अवस्थामा यदि तपाईआफैंले आवाज दबाउन सक्नुहुन्न भने, तुरून्त कारलाई सेवा केन्द्रमा लैजानुहोस्।
प्रकाशित मिति: Aug 31, 2020
नयाँ बाइक किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ ? यस्ता छन्, बजारमा चलेका मोटरसाईकल !
पछिल्लो समय मोटरसाइकलको माग बढिरहेको छ । त्यसमाथि झन् कोभिड–१९ का कारण सार्वजनिक यातायातमा यात्रा
नेपाली बजारमा लन्च हुदैँछ नयाँ विद्युतीय गाडी ‘निशान लिफ’
निशान मोटर्सको लागि नेपालको आधिकारिक बिक्रेता पायोनियर मोटो कर्पले निशानको सर्वाधिक प्रतीक्षित “निशान लिफ” नेपालमा
बजाजका बाइकको मूल्य वृद्धि, जान्नुहोस् कुनको मूल्य कति?
नेपालका लागि बजाज बाइकको आधिकारिक वितरक हंसराज हुलासचन्द एन्ड कम्पनीले हिजो शनिबारदेखि लागू हुने गरी
अब कियाको कार किन्दा ग्राहकले चार लाखसम्म छुट पाउने
किया मोटर्सको आधिकारिक बितरक कन्टीनेन्टल ट्रेडिङ इन्टरप्राइजेजले दसै तिहार लक्षित गर्दै नयाँ स्कीम सार्वजनिक गरेको
यी ३ कार अब मासिक ११ हजारदेखि १४ हजारसम्म किस्ता तिरेर किन्न सकिन्छ!
मासिक ११ हजारदेखि १४ हजारसम्म किस्ता तिरेर कार किन्न सकिने एनआईसी एशिया बैंकले अफर ल्याएको
कोरोनाको कारण युरोपमा कार बिक्री २५ प्रतिशतले घट्यो
कोरोनाभाइरस महामारीका कारण युरोपमा यस वर्ष कार बिक्रीमा २५ प्रतिशतले कमी आएको छ । युरोपेली